Umlilo HD 10, ithebhulethi yeAmazon ivuselelwa ngakumbi kwaye inobuqaqawuli | Iindaba zeGajethi
Umlilo HD 10, ithebhulethi yeAmazon ivuselelwa ngakumbi kwaye inobuqaqawuli
UMiguel Hernandez | 26/05/2021 10:00 | ngokubanzi, Reviews
Amazon iyaqhubeka nokubheja ekulawuleni idemokhrasi kwinani elithile lamacandelo kunye neemveliso zalo ezisisiseko, yile ndlela inkampani kaJeff Bezos ibisungula ngayo iimveliso ezininzi eziphumelele ngokubanzi ngenxa yexabiso labo lemali. Phakathi kwezi sinezithethi, ii-e-ncwadi kunye neepilisi.
Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba kutheni la macwecwe eAmazon angabizi kakhulu zihlala zithengisa kakhulu kwaye zithini izakhono zabo zobugcisa, ngaba unomdla wokuzithenga?
Njengamaxesha onke, sigqibe kwelokuba sihambe nohlalutyo lwethu olunzulu kunye nevidiyo itshaneli yethu yeYouTube, Kule vidiyo uya kuba nakho ukubona i-unboxing epheleleyo ukujonga imixholo yebhokisi yale Amazo Fire HD 10. Ewe kunjalo, sikwenza iimvavanyo kwizixhobo zekhompyuter, kwiimpawu ezineenkcukacha ngakumbi nakwi Iscreen kunye nezithethi zayo, yeyiphi ividiyo enokuba sisincedisi sokufunda olu hlalutyo. Ungaphuthelwa kwaye usishiye nayiphi na imibuzo kwibhokisi yezimvo.
2 Iimpawu zobugcisa kunye nokunxibelelana
3 Inkqubo yokusebenza kunye namava omsebenzisi
4 Amava emultimedia
Ngeli thuba, iAmazon ithathe isigqibo sokungavuseleli konke konke, inkampani iJeff Bezos ihlala ivula uyilo olunobunkunkqele kunye nezinto ezingathi, nangona zingazukutsala umdla wethu ngenxa yokutya kwabo, baya kwenza oko ngenxa yokuxhathisa kwabo ukubetha nokukrwela. Kwenzekile ngale Fire HD 10 isuka eAmazon ezondla ezinye izixhobo ezifanayo zenkampani kwaye ke oko kusishiya sangaphandle kancinci ukugqiba ukuhamba kunye nokusetyenziswa ixesha elide, Matte emnyama kunye ne-polycarbonate erhabaxa kancinci kunye nelogo yokuncuma ngasemva kwale thebhulethi inkulu ngenxa yobungakanani bayo.
I-HD yoMlilo iAmazon ye-10 inciphile phantsi ukusuka kwinguqu yayo yangaphambili ukuya Iigram ezi-465
Ubungakanani: X x 247 166 9,2 mm
Sinekhamera engemva kwikona ephezulu, ngendlela efanayo naleyo ikwindawo ephezulu yonxibelelwano kunye namaqhosha, izibuko le-USB-C, izibuko leJack elingu-3,5 mm, amaqhosha amabini evolumu kunye neqhosha lamandla. Ngokwenxalenye yayo, iphaneli yesikrini, engagrunjwa, inoyilo olucwangcisiweyo olunceda ukubekwa kwabakhuseli. Sinekhamera yeefowuni zevidiyo ezibekwe kwicala lasekhohlo ukuba sizisebenzisa ngokuthe nkqo nakwindawo engaphezulu esembindini ukuba siyisebenzisa tye, njengoko kubonakala ukuba kujoliswe kuko.
Iimpawu zobugcisa kunye nokunxibelelana
Kweli candelo, iAmazon khange idume ngokubandakanya itekhnoloji yamandla kunye nezixhobo zekhompyuter kwezi zixhobo, kodwa ngokuzama ukunika ubudlelwane obuqinileyo phakathi komgangatho kunye nexabiso. Kule meko baye babandakanya iprosesa ii-cores ezisibhozo kwi-2,0 GHz kabani umenzi wayo esingamaziyo, nangona yonke into ibonisa ukuba yiMediaTek kuhlalutyo lwethu. I-RAM ikhula iye kwi-3 GB iyonke ngelixa ukubheja kugcino lwe-32 GB okanye i-64 GB kuxhomekeke kwimodeli ekhethiweyo.
Ukudibanisa sine Ibhendi yeWifi 5, ebonakalise intsebenzo elungileyo kuhlalutyo lwethu zombini i-2,4 GHz kunye neenethiwekhi ze-5 GHz. I-Bluetooth 5.0 LE qUya kuba ujongene nokudluliselwa kwesandi kwii-headphone ezingenazingcingo okanye izithethi, konke ngaphandle kokulibala izibuko 3,5 mm jack ukuba le Fire HD 10 ibandakanya kwinxalenye yayo ephezulu.
Ngokuphathelele kwiikhamera, 2 MP yekhamera yangaphambili kunye ne-5 MP yekhamera esemva eya kuthi isincede siphume enkathazweni, skena amaxwebhu kunye ... nokunye okunye.
Inkqubo yokusebenza kunye namava omsebenzisi
Njengoko usazi kakuhle, iimveliso zomlilo zaseAmazon, nokuba ziitafile okanye izixhobo zeTV ezikrelekrele, zinenguqulo eyenziwe ngokwezifiso ye-Android egxile kubasebenzisi beAmazon. Sine-OS yoMlilo, umaleko we-Android ongenayo iVidiyo kaGoogle, Nangona kunjalo, Singafaka ii-APKs kuwo nawuphi na umthombo wangaphandle esiwubona ufanelekile, njengoko ziya kuhambelana ngokupheleleyo. Ngokwenxalenye yayo, iNkqubo yokuSebenza ayinayo i-bloatware ngaphaya kwezicelo ezihlanganisiweyo zeAmazon kunye nokuphuculwa kwayo kwizixhobo zekhompyuter kunefuthe kwixesha lokuhamba ngokungxama.
Ngokwenxalenye yayo, sinesikhangeli esinokuphuculwa, esinokutshintsha ngokukhawuleza ngeChannel ukuba unqwenela. Ukongeza, kwivenkile yesicelo yeAmazon sinokufikelela kwiinguqulelo zeNetflix, iDisney + kunye nabanye abasasazi bokusasaza ababoneleli bemixholo yokubukelwayo. Nangona kunjalo, ndinyanzelisa ukuba ukufaka ii-APKs kwimithombo yangaphandle kuphantse kube luxanduva, ekungekho sithintelo kulo.
Ngakolunye uhlangothi, Ithebhulethi esetyenziswayo ijolise ngokucacileyo kumxholo wokutya, funda, ukhangele okanye ubukele iividiyo. Xa kuziwa ekudlaleni imidlalo yevidiyo, siqala ukufumana ezinye iingxaki zomsebenzi, njengoko kunokulindelwa kwizixhobo ezichaziweyo.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, sigxile kwinto yokuba siza kuwusebenzisa umxholo, kwaye ke kubalulekile ukuba sihlalutye ukusebenza okuqhuba le misebenzi yeAmazon Fire HD 10. Kule meko, ibango eliqinileyo lokunyusa ukukhanya kwesikrini nge-10% xa kuthelekiswa nohlobo lwangaphambili, into eqaphela ngokunyanisekileyo, iyenza ibe mnandi ngakumbi ukuyisebenzisa ngaphandle. Nangona kunjalo, ayikuko ukuba sinokuqaqamba okuphawuleka ngakumbi, okongeze kukusilela kwezinto ezichasayo ezichazayo kuthetha ukuba sinokuba nobunzima kwilanga elipheleleyo, into engayi kuba yinto yesiqhelo.
Isigqibo: Iiphikseli ezingama-1.920 x 1.200 (224 dpi)
Ngokuphathelele isandi, Sineseti ezibini ezibekwe kakuhle izithethi eziya kuthi zibonelele ngokuhambelana nazo Dolby Atmos ukongeza kwestiriyo esiqhelekileyo. Basebenza ngaphezulu kokuchanekileyo kwaye banikezela ngesandi esaneleyo ngokwaneleyo ukonwabela iividiyo, iimovie kunye nomculo.
Ngokumalunga nokuzimela, ngaphandle komthamo kwi-mAh sinokukuxelela ukuba sineentsuku ezimbini ukuya kwezintathu zokusebenzisa ngokulula, oko kuhamba kunye Izibuko layo le-USB-C kunye neshaja ye-9W ebandakanyiweyo yeyiphi iAmazon enobubele ngokwaneleyo ukuba ibandakanye ebhokisini. Lilonke, ngeenxa yeeyure ezili-12 zexesha lesikrini.
Sifumana ithebhulethi ye-10,1-intshi, izixhobo ezilinganisiweyo kunye nexabiso lazo kunye nesibonelelo esinomdla esijolise ikakhulu ekutyeni umxholo, nokuba kukwenziwa kumaqonga anikezelwa yiAmazon uqobo okanye kubaboneleli bangaphandle. Ixabiso layo liya kuba malunga ne-164,99 euro yenguqulo engama-32 GB kunye nee-euro ezingama-204,99 zenguqulo engama-64 GB. Ngelixa kuyinyani ukuba kwizibonelelo ezithile sinokufumana iipilisi ezingcono ezigqityiweyo ngexabiso elifanayo kwiifemu ezinje ngeChuwi okanye iHuawei, isiqinisekiso nolwaneliseko olunikezelwa yiAmazon lunokudlala iasethi ebalulekileyo kulo mbandela. Iyafumaneka ukusukela ngoMeyi 26 kwiwebhusayithi yeAmazon.
Umlilo HD 10
Ithunyelwe nge: Meyi 26 ye2021
Utshintsho lokugqibela: Meyi 23 ye2021
Uyilo kunye nezinto ekucingelwa ukuba ziyala
Inkqubo yokusebenza ngaphandle kwebloatware
1GB enye i-RAM ilahlekile
Ixabiso liya kuba nomtsalane ngakumbi kwizibonelelo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Umlilo HD 10, ithebhulethi yeAmazon ivuselelwa ngakumbi kwaye inobuqaqawuli
I-Reolink Argus 3, ikhamera yokujonga ngokufanelekileyo
Shure MV5C, uhlalutyo olunzulu lweemakrofoni eziguquguqukayo